Hay’adda WHO oo codsatay in ay soo qiimeeyaan magaalada hubka kiimikada lagu weeraray ee Suuriya - BBC News Somali
Hay’adda WHO oo codsatay in ay soo qiimeeyaan magaalada hubka kiimikada lagu weeraray ee Suuriya
Lahaanshaha sawirka AFP PHOTO/ HO/ DOUMA CITY CO-ORDINATION COMMITTEE
Image caption Dadka lagu weeraray hubka mamnuuca ah ee kiimikada
Ha'yadda caafimaadka adduunka ayaa waxay codsatay in loo ogolaado galitaan si madax bannaan ee magaalada Douma ee dalka Suuriya si ay usoo indho-indheeyaan warbixinnada sheegayo in 500 qof ay ku waxyeeloobeen weerarka hubka kiimikada lagu qaaday halkaasi.
Ha'ayadda ayaa waxay sheegtay in codsigooda ay ooga gol leedahay in caawimaad la siiyo dadka dhibaataysan oo xaaladda caafimaad darrada laga jawaabo iyo qiimaynta saamaynta arrimmaha caafimaadka ay ku reebtay deegaankaasi.
WHO ayaa soo xigatay warbixin sheegayso in 70 qof lagu dilay Suuriya islamarkaana sheegtay in kooxaha caafimaadka inay kusoo wargeliyeen in boqolaal qof ay la dhibaataysan yihiin sunta kiimikada oo ay kamid tahay cirriira dhanka neefsiga ah iyo saamayn neerfaha ah.
Warshad kiimiko oo ku qaraxday magaalada Houston
Qaramada Midoobay oo dowladda Suuriya ku eedeeysay weerar kiimiko ah
Labo ka mid hawlwadeenada caafimaadka ayaa kamid ahaa dadka ay saamaysay weerarka la sheegay in hubka mamnuuca ah loo adeegsaday, sida ku xusan bayaanka kasoo baxay ha'yadda WHO.
Dr Peter Salama oo ka tirsan ha'yadda ayaa waxay sheegay 'inay ka caroodeen warbixinnada iyo sawirrada naxdinta leh ee kasoo baxaayo magaalada Douma'
Dowladda Suuriyaa ayaa diiday eedeymaha ah inay ka dambaysay weerarka kimikada ee dalka Suuriya.
Dowladda Maraykanka ayaa ku hanjabtay inay tallaabo qaadi doonto oo ka dhan ah weerarka suuriya.